(src)="1.2"> In luglio , un gruppo di studenti marocchini ha lanciato la pagina Facebook " Unione degli studenti marocchini per il cambiamento del sistema educativo " ( acronimo francese UECSE ) .
(trg)="1.3"> ဇူလိုင်လတွင် မော်ရိုကိုကျောင်းသားတစ်စုသည် " ပညာရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲမည့် မော်ရိုကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂ " ( ပြင်သစ်စကားဖြင့်အတိုကောက် UECSE ) ဟုခေါ်သည့် ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) စာမျက်နှာကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ။
(src)="2.1"> In meno di un mese dalla sua apertura , la pagina Facebook registra ben più di 10.000 membrieparecchio supporto sui social media .
(trg)="1.4"> ထိုအဖွဲ့သည် " ပညာရေးစနစ်ကို တိုးတက်စေရန် ခိုင်မာသော နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည့် " မော်ရိုကိုလူငယ်များကို စုစည်းလျက်ရှိသည် ။
(src)="5.1"> In un video pubblicato su YouTube prima delle proteste , gli studenti chiedevano un cambiamento radicale del sistema educativo."Tutto il sistema educativo va cambiato " , dice uno studente davanti alla telecamera .
(trg)="2.2"> ယင်းဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) စာမျက်နှာသည် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော်ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် အားပေးထောက်ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ့သည် ။
(src)="5.2"> " Il sistema attuale va completamente abbattutoericostruito da capo " dice un' altro .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးက ပြောင်းဖို့လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကင်မရာကိုကြည့် ၍ ပြောသည် ။
(src)="6.1"> Il giorno della protesta , centinaia di studentiei loro genitori hanno risposto alla chiamata .
(trg)="6.3"> " ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကို အားလုံးပိုင်းချလိုက်ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန်တည်ဆောင်ဖို့လိုတယ် " ဟု အခြားတစ်ယောက်က ဆိုသည် ။
(src)="6.2"> Il tutto è testimoniato dalle numerose immaginievideo pubblicareecondivise su Internet .
(trg)="6.4"> ဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်ကြသော ကျောင်းသားအများအပြားက ဂုဏ်သိက္ခာရှိ Grandes Ecolesက တင်ပြသည်များတွင် အကျိုးမရှိသော အဟန့်အတားများ ၊
(src)="8.1"> Studenti marocchini chiedono la riforma del sistema educativo - Fotografia di Hassan Ouazzani - Utilizzata con permesso
(trg)="7.2"> ဗီဒီယိုများအရ ရာချီသောကျောင်းသားများနှင့် ၄င်းတို့ ၏ မိဘများက တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည် ။
(src)="11.1"> La manifestazione si è svolta pacificamente .
(trg)="9.3"> ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည် ။
(src)="12.1"> Sul proprio blog Tumblr , il gruppo UECSE scrive :
(trg)="10.3"> ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည် ။
(src)="12.2"> Giovani studenti chiedono un miglior sistema educativo .
(trg)="12.1"> ဆန္ဒပြမှုသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည် ။
(src)="12.3"> Sono studenti marocchini , stanchi della situazione attuale .
(trg)="13.1"> တမ်ဘလာတွင်လည်း UECSE ကရေးသားခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="12.4"> Essi vogliono cambiare il loro futuroerealizzare i propri sogni .
(trg)="13.2"> လူငယ်ကျောင်းသားတွေက ပညာရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုကို တောင်းဆိုနေကြတာ ၊
(src)="12.5"> Sarà una grande impresa .
(trg)="13.3"> သူတို့တွေက မော်ရိုကိုကျောင်းသားတွေ ၊
(src)="1.3"> I graffiti moderni sono nati negli anni 60aNew Yorkesono stati inspirati dalla musica hip-hop .
(trg)="1.2"> ဂရပ် ( ဖ် ) တီဆိုသောစာလုံးသည် ရေးသားသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဂရပ်ဖိန်းဟူသည့် ဂရိစာလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည် ။
(src)="1.4"> Il numero di graffiti firmati che ha un artista dipende dalla reputazioneedalla fama dell' artista .
(trg)="1.4"> ခြယ်မှုန်းသူအနုပညာရှင် ၏ ဂရပ် ( ဖ် ) တီအရေအတွက်မှာ ၄င်း ၏ ဂုဏ်ရည်နှင့်ကျော်ကြားမှုပေါ်တွင် မူတည်နေသည် ။
(src)="2.1"> Benchèavolte questo tipo di arte è rimasto al di sotto del radar ,enonostante il fatto che le autorità hanno speso molti soldi nel cancellare i graffiti , l ' arte di strada si è diffusa in altri paesi ed è diventata popolare negli spazi urbani in molte città .
(trg)="2.2"> အာဏာပိုင်များမှာ ဂရပ် ( ဖ် ) တီများကို ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် ငွေကြေးမြောက်မြားစွာ သုံးစွဲရသည်ဆိုသော်လည်း ထိုလမ်းပေါ်ကအနုပညာမှာ အခြားနိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး မြို့ပေါင်းများစွာရှိ မြို့ပြရပ်ဝန်းတွင် လူသိများလာခဲ့သည် ။
(src)="2.2"> Alcuni sono scarabocchi con messaggi personali ,ealtri sono vere opere d' arte .
(trg)="2.3"> အချို့မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာသားများကို ထင်ရာခြစ်သွားခြင်းများဖြစ်ပြီး အခြားတို့မှာ အနုပညာအစစ်များဖြစ်သည် ။
(src)="3.1"> Molte pagine web hanno dedicato i loro contenuti per mostrare questo tipo d' arte di strada , come il blog Fogonazos , del quale una raccolta può essere vista qui :
(trg)="3.1"> ဖိုဂိုနဇို ( စ် ) ဘလော့ ( ဂ် ) ကဲ့သို့ ဝက် ( ဘ် ) စာမျက်နှာပေါင်းများစွာက ထိုလမ်းပေါ်ကအနုပညာအမျိုးအစားကို ခင်းကျင်းပြသရန် ၄င်းတို့ ၏ အကြောင်းအရာများကို အထူးပြုသုံးခဲ့ကြသည် ၊
(src)="4.1"> " Lasciamogli mangiare crack " dice questo graffitoaNew York .
(trg)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော့ ( ခ် ) မြို့မှ ဂရပ် ( ဖ် ) တီ ။
(src)="4.2"> Immagine dell' utente Flickr Omiso .
(trg)="4.2"> ဖလစ်ကာအသုံးပြုသူ အိုမီဆို ၏ ဓာတ်ပုံ
(src)="6.1"> DisegnatoaManchester , UK .
(trg)="6.1"> မန်ချက်စတာမြို့ ၊
(src)="6.2"> " I ricchiei potenti pisciano su di noiei media ci dicono che sta piovendo " .
(trg)="6.2"> ယူကေတွင် ဆွဲထားသော " လူချမ်းသာတွေနှင့် အာဏာရှင်တွေက ငါတို့ကို ရှုံ့ချတာကို သတင်းဌာနတွေက မိုးရွာနေတယ်လို့ ပြောနေကြတယ် "
(src)="8.1"> Queste foto sotto ( fatte dall' autore ) mostrano l' ondata di graffiti che può essere vista camminando per Granada , nella Spagna meridionale , le convincenti immaginiefrasi fanno riferimento al sistema politico ed economico del paese .
(trg)="8.2"> ဂရန်ဒါ ၌ လမ်းလျှောက်သွားရာတွင် မြင်တွေ့နိုင်သော ဂရပ် ( ဖ် ) တီလှုုိင်းကို ဖော်ပြနေသည် ။
(trg)="8.3"> အားကောင်းသော ပုံများနှင့် စာပိုဒ်များက နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးစနစ်ကို ကိုးကားထားသည် ။
(src)="9.1"> Nella terza foto , si possono vedere le lettere PP ( Partito Popolare Spagnolo )ePSOE ( Partito Socialista Spagnolo dei lavoratori ) .
(trg)="9.1"> တတိယဓာတ်ပုံတွင် PP ( စပိန် လူကြိုက်များသော ပါတီ ) နှင့် PSOE ( စပိန် ဆိုရှယ်လစ် အလုပ်သမားပါတီ ) ဟူသော စာလုံးများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည် ။
(src)="9.2"> Le abbreviazioni dei partiti politici più popolari in Spagna appaiono disordinate con un logo solo : un modo per dire che i due partiti sono la stessa cosa , una denuncia al sistema bipartitico .
(trg)="9.2"> စပိန်နိုင်ငံ ၏ လူသိအများဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခု ၏ အတိုကောက်စာလုံးများကို အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည် ။
(trg)="9.3"> ပါတီနှစ်ခုမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပါတီစနစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသနေသည် ။
(src)="9.3"> Anche nell' altra foto si vede un muro nella città con dei polliela didascalia " Gente presa , mercado libre " ( Le persone diventano prede nel mercato libero ) .
(trg)="9.4"> ကြက်များပါသော ရုပ်ပုံကားချပ်အကြီးတစ်ခုကိုလည်း " Gente presa , mercado libre " ( လူတွေက လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်မှာ အစာရှာထွက်နေကြတယ် ) ဟူသော စာတန်းနှင့်အတူ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည် ။
(src)="11.1"> " Consumo felice "
(trg)="11.1"> " ဝမ်းမြောက်စွာ သုံးစွဲခြင်း "
(src)="13.1"> " In defesa della pubblica "
(trg)="13.1"> " လူထု အတွက် ခုခံကာကွယ်ခြင်း "
(src)="14.1"> " L' istruzione non si vende "
(trg)="14.1"> " ပညာရေးသည် ရောင်းရန်မဟုတ် "
(src)="16.1"> A Madrid si possono spesso trovare i graffiti del ben noto artista basco Alberto Basterrechea , che ha iniziatoascrivere poesia più di sette anni fa .
(trg)="16.2"> သူသည် မြို့တော် ၏ နံရများပေါ်တွင် ထွင်းရေးထားသော ကာရန်အပိုဒ်များ ၏ ဓာတ်ပုံကို ပြသသည့် နယ်အိုရာဘီအိုဆို နှင့် ဘာတာနီယားဟုခေါ်သော ဘလော့ ( ဂ် ) နှစ်ခု ၏ စာရေးသူဖြစ်သည် ။
(src)="16.2"> E ' autore di due blog intitolati NeorrabiosoeBatania dove presenta foto dei suoi versi tappezzati sui muri della capitale .
(trg)="16.3"> သူ့ကဗျာများသည် တစ်ကို်ယ်ရည်အစွန်းဘက်ကို ဦးတည်လေ့ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ၄င်းတို့အတွက် တောင်းဆိုသံများ ပါဝင်နေခြင်းများ ပါလေ့ရှိပြီး အောက်ပါပုံများတွင် တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
(src)="18.1"> " Quale libertà , uguaglianzaachi , quando fraternità " ( un gioco di parole in spagnolo delle famose Liberté , Egalité , Fraternité ) .
(trg)="18.2"> ဘယ်သူ့ကို ညီအောင်လုပ်ပြီး ဘယ်တော့ ညီအစ်ကို ဖြစ်မှာလဲ " ( ကျော်ကြားသော ပြင်သစ်စကားလုံးများဖြစ်သည့် Liberté , Egalité , Fraternitéတို့ကို ကစားထားခြငး် ။
(src)="19.1"> In ogni parte del mondo è una cosa comune per i pedoni camminare fra tutti i tipi di dipinti nelle mura esterne dei palazzi , nei parchiesulle case .
(trg)="19.3"> ပန်းခြံများနှင့် အိမ်များ ၏ အပြင်ဘက်နံရများပေါ်ရှိ ဆေးရေးပုံစံမျိုးစုံကြားတွင် လမ်းလျှောက်သွားရန် လူသွားလမ်းရှိတတ်သည်မှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည် ။
(src)="19.2"> Ma oltre alle mura cittadine , i graffiti si sono mossi dalle strade ad altri tipi di media : book fotografici , blogepagine facebook come Street Art Graffiti .
(trg)="19.6"> ဘလော့ ( ဂ် ) များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းပေါ်က အနုပညာကဲ့သို့ ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) စာမျက်နှာများဆီသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။
(src)="1.1"> Uganda : Anonymous sostiene il Gay Prideeattacca siti istituzionali
(trg)="1.2"> အမည်မသိအဖွဲ့မှ လိင်တူချစ်သူအခွင့်အရေးကို ထောက်ခံအားပေး ၊
(src)="1.2"> Il gruppo di " hacktivisti " internazionale Anonymous ha attaccato il sito web del Primo ministro ugandese ed è riuscito ad entrare nel database del sito internet del ministro della giustizia , per manifestare il suo sostegno agli attivisti locali per i diritti umani delle persone Lesbiche , Gay , BisessualieTransgendereIntersex ( LGBTI ) residenti in Uganda .
(trg)="1.4"> " အမည်မသိ " ဆိုသောနာမည်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခိုးဖောက်၀င်ရောက်သူ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့သည် ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံပိုင် ၀န်ကြီးချုပ်၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ခိုးဖောက်၀င်ရောက်ခဲ့သည် ။
(src)="3.1"> Il gruppo ha preso il controllo del sito web del Primo ministro ugandeseepubblicato foto del primo Gay Pride svoltosi in Uganda , insiemeaun falso riconoscimento ufficiale della settimana dell' orgoglio gayealle scuse formali agli omosessuali proprio da parte del Primo Ministro .
(trg)="3.1"> ယင်းအဖွဲ့သည် ၀န်ကြီးချုပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုထိန်းချုပ် ၍ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ၏ ပထမဆုံး လိင်တူချစ်သူတန်ဖိုးမြှင့်တင်ရေး နှင့် တရား၀င်အသိမှတ်ပြုရေးပွဲ ရက်သတ္တပတ်မှ ဓါတ်ပုံများကို ထို၀က်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ခဲ့ကြသည် ။
(src)="3.2"> Tutto ciò accompagnato dalla diffusione di password usate dal ministero di Giustizia .
(trg)="3.2"> လိင်တူချစ်သူများသို့ ၀န်ကြီးချုပ်ထံမှ တောင်းပန်စာကိုလည်း ဖန်တီးတင်ခဲ့ကြသည် ။
(src)="4.1"> Anonymous afferma che le sue azioni in Uganda continueranno contro i siti del governoeogni forma di comunicazione finoaquando il governo non concederàatutti i suoi cittadini , compresi gli LGBT , parità di trattamento .
(trg)="5.1"> အစိုးရမှ လိင်တူချစ်သူများကို အများပြည်ကဲ့သို့ တန်းတူညီတူ မဆက်ဆံသရွေ့ ၄င်းတို့ ၏ ယူဂန်ဒါအစိုးရ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးများ အပေါ် အဓိကထားတိုက်ခိုက်မှု ယူဂန်ဒါစီမံချက်များကို လုပ်ဆောင်နေဦးမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ။
(src)="5.1"> Il primo Gay Pride della storia dell' Ugandaha avuto luogo lo scorso4agostoaEntebbe — con una serie di eventi diversi , tra cui una festa , una parata sulla spiaggiaeun festival cinematografico .
(trg)="8.2"> အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေးဗစ် ဘာဟတီသည် လိင်တူချစ်ခြင်း နှင့် လိမ်တူဆက်ဆံသည်ဟုယူဆရ သူများအား သေဒဏ် ချမှတ်ရန် သို့မဟုတ် တသက်တစ်ကျွှန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ဟူသော လိင်တူချစ်သူဆန့်ကျင်ရေး ပြစ်ဒဏ် ( မိန်မလျာများကို သတ်သော ပြစ်ဒဏ်ဟုလည်း လူသိများသည် ) ကို စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည် ။
(src)="7.2"> Solo in seguito all' opposizioneealle critiche che ha sollevato , Bahati ha riscritto la legge lo scorso febbraio apportandovi alcuni emendamenti .
(trg)="8.4"> အကြမ်းဖက်ကန့်ကွက်မှု များ ရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုနှစ် ဖေဖော်၀ါရီလတွင် ဘာဟတီက ထိုပြစ်ဒဏ်ကို အနည်းငယ် ပြန်လည်ပြုပြင်သတ်မှတ်ခဲ့သည် ။
(src)="8.1"> In un messaggio pubblicato il 14 Agosto 2012 dal gruppo si legge :
(trg)="11.2"> ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ အစိုးရက ယူဂန်ဒါလူမျိုး လိင်တူချစ်သူတွေကို တရားခံရှာ ၊
(src)="9.1"> L' attacco di oggi con il conseguente defacement del sito del primo ministro è stato solo il primo di una lunga serie di attacchi contro il governoele istituzioni ugandesi per i crimini commessi contro la comunità LGBT .
(trg)="11.5"> ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်နှင့် တန်းတူဆက်ဆံပြီး လိင်တူချစ်သူများကို ဖမ်းဆီထောင်ချ အရှက်ရအောင်လုပ်တာတွေ မရပ်တန့်သရွေ့ ယူဂန်ဒါအစိုးရပိုင် ဆိုက်တွေကို ပစ်မှတ်ထားနေဦးမှာပဲ ဖြစ်တယ် ။
(src)="10.1"> Al momento , abbiamo il pieno controllo del sito web del Presidente dell' Uganda .
(trg)="11.6"> အမည်မသိအဖွဲ့ ၏ လှုပ်ရှားမှုများသည် ယူဂန်ဒါရှိ လိင်တူချစ်သူများအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား ထိခိုက်လာမည်ကို စိုးထိတ်နေသည် ။
(src)="10.2"> Non rimarremo seduti mentre le persone LGBT residenti in Uganda verranno perseguitate , abusateeuccise da un governo spietatoecorrotto . #TheEliteSocietye#Anonymous terranno nel loro mirino i siti del governo ugandeseetutte le forme di comunicazione finoaquando il governo dell' Uganda tratterà tutti gli esseri umani comprese tutte le persone LGBT in maniera paritaria , con rispetto , dignitàesospenderà immediatamente l' arrestoela persecuzione degli LGBT .
(trg)="12.1"> လိင်တူချစ်သူ ဆန့်ကျင်ရေးသမားဖြစ်တဲ့ ယူဂန်ဒါအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအကုန်လုံးကို ကျွန်တော်အားပေးထောက်ခံနေပေမဲ့ ဒီကိစ္စက တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပွဲမှာတုန်းက သတ္တိရှိရှိနဲ့ သူတို့မျက်နှာတွေထုတ်ပြခဲ့တဲ့ လိင်တူချစ်သူများအသိုင်းအဝိုင်းက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို နောက်ပြန်သွားစေမှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ် ။
(src)="11.1"> Per quanto io appoggi tutte le proteste contro l' omofobia al governo , ho paura che questa possa avere un effetto contrario per la comunità di attivisti LGBTI i quali hanno mostrato il loro volto così coraggiosamente durante la marcia del Gay Pride .
(trg)="12.2"> ယူဂန်ဒါ လိင်တူချစ်သူ အသိုင်းအဝိုင်းက ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ ဒီထိခိုက်လွယ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို သူတို့တွေ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးရယ်လို့ စိုးရိမ်တာပါ ။
(src)="11.2"> Poiché la maggiore preoccupazione è che essi abbiano fallito nel cogliere le questioni più delicate che interessano la comunità LGBT ugandese .
(trg)="12.4"> ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ အမည်မသိအဖွဲ့ဟာ ယူဂန်ဒါ လိင်တူချစ်သူအရေး ဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ သူတို့ လုပ်ချင်တာကို လုပ်တဲ့အပြုအမူကိုပါပဲ ။
(src)="11.5"> Forse SMUG o qualce altra organizzazione gli ha chiesto di attaccare i siti del governo ?
(trg)="12.5"> SMUG ဒါမှမဟုတ် အဲလိုမျိုး တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေ သူတို့ကို ဒီလိုစေခိုင်းလို့လား ။
(src)="11.6"> Si rendono conto di come le loro azioni potrebbero essere prese dagli ugandesi ?
(trg)="12.6"> သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်က ယူဂန်ဒါလူမျိုးတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်စေမလဲ ဆိုတာကို နားမလည်လို့ပဲလား ။
(src)="11.8"> Devono capire bene quello che fanno .
(trg)="12.8"> သူတို့ သူများတွေဆီက အကြံညဏ်ယူဖို့ လိုနေပြီ ။
(src)="11.9"> Queste azioni piene di buone intenzioni potrebbero provocare gravi ripercussioni per gli attivisti locali .
(trg)="12.9"> ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပေမဲ့ က တကယ်တက်ကြွဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် ။
(src)="11.10"> L' attacco ai siti del governo per correre in " aiuto " delle vittime dell' omofobia di stato ?
(trg)="12.10"> လိင်တူချစ်သူတွေကို ကူညီချင်လို့ဆိုပြီး အစိုးရ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ခိုးဖောက်၀င်ရောက်တယ်လား ။
(src)="11.11"> Chi è il responsabile ?
(trg)="12.11"> ဘယ်သူက အဲဒီလိုလုပ်တာလဲ ။
(src)="11.14"> Nathan inoltre sottolinea la dannosità della foto utilizzata dal gruppo :
(trg)="12.13"> ဖိုမစိတ်ပြောင်းသူများအရေးကို တကယ်တက်ကြွဆောင်ရွက်နေသူများနဲ့ ဆွေနွေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။
(src)="12.1"> La foto usata da Anonymous che ha fatto il giro del mondo è pericolosaenon avrebbe dovuto essere impiegata in quel modo .
(trg)="12.14"> နသန်ကလည်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် အဖွဲ့မှ အသုံးပြုထားသော ဓါတ်ပုံသည် အန္တရ့ာယ်များကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည် ။
(src)="12.2"> Io ho twittato Anonymous chiedendo una soluzione .
(trg)="13.1"> အမည်မသိ အဖွဲ့က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ၊
(src)="12.3"> Dio solo sa cosa si possa fareaquesto punto .
(trg)="13.2"> အခုဆို အင်တာနက်တခုလုံး ပြန်နှံ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံက အန္တရာယ်များပါတယ် ၊
(src)="12.4"> Sembra che Anonymous possa aver utilizzato quelle foto senza chiedere autorizzazione primaecosì nel loro tentativo di aiutare la comunità gay ugandese , possano invece aver causato più danni ai veri attivisti che coraggiosamente stanno in prima linea .
(trg)="13.7"> သူတို့ရဲ့ ယူဂန်ဒန် မိန်းမလျာများကို ကူညီစေလို့တဲ့ဆောင်ရွက်မှုကလည်း တကယ့်အပြင်ကနေ ရဲရဲရင့်ရင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသူတွေကို အန္တရာယ်တွင်းထဲရောက်စေတာပါပဲ ။
(src)="12.5"> Sull' account Twitter del gruppo Anonymous questa la giustificazione dell' intervento :
(trg)="13.10"> အမည်မသိအဖွဲ့မှ ယူဂန်ဒါ ငရုတ်ကောင်းနီ သတင်းစာ၀က် ( ဘ် ) ဆိုဒ် ၊
(src)="12.7"> Ci sono rapporti di attacchi condotti da Anonymous contro il sito di RedPepper ( tabloid ugandese ) , la borsa ugandeseeil servizio carcerario .
(trg)="13.11"> စတော့ လဲလှယ်မှု ၀က် ( ဘ် ) ဆိုဒ် နှင့် အကျဉ်းထောင် ၀န်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ ၀က် ( ဘ် ) ဆိုဒ် များကို ပစ်မှတ်ထားရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသော မှတ်တမ်းများလည်း ရှိသည် ။
(src)="12.8"> Nell' Agosto 2006 , Red Pepper ha pubblicato i nomi di presunti omosessuali .
(trg)="13.13"> ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ငရုတ်ကောင်းနီမှ ယူဂန်ဒန် လိင်တူချစ်သူဟု ယူဆရသူများ ၏ အမည်များကို ထုတ်ဝေဖော်ပြခဲ့သည် ။
(src)="12.10"> Noi non abbiamo dimenticato : ) Il vostro sito da adesso è f*** x #OpFuckUganda
(trg)="13.14"> @ PinkNinj4 : ohai @ RedPepperUG မင်း လိင်တူချစ်သူ နာမည်တွေနဲ့ လိပ်စာတွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား ?
(src)="12.11"> Su Twitter si possono seguire gli aggiornamenti sul caso specifico .
(trg)="13.15"> ငါတော့မမေ့သေးဘူး အခု မင်းဆိုက်က ကြမ္မာဆိုး၀င်ပြီ x # OpFuckUganda
(src)="1.1"> Atlete saudite : fuori dalle Olimpiadi , gran successo su Twitter
(trg)="1.1"> ဆော်ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ်မှအပြန် တွစ်တာမုန်တိုင်းထန်
(src)="4.1"> Di seguito alcuni esempi di messaggi di supporto ad entrambe le atlete da parte di utenti Twitter sauditi :
(trg)="5.1"> အောက်တွင်ဖော်ပြထားတာသည်မှာ ဆော်ဒီတွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးက အားကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးအတွက် ထောက်ခံအားပေးထားသော တွစ်တာစာတိုနမူနာများပင် ဖြစ်သည် ။
(src)="5.1"> " L' importante non è vincere , ma partecipare " #SaraAttar prima atleta donna saudita che abbia mai gareggiato #olympicmoments ( @DIAstyle su Twitter )
(trg)="6.1"> အနိုင်အရှံုးသည် သာမည ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည်အဓိက # SaraAttar ထာဝရယှဉ်ပြိုင်နေမယ့် ပထမဆုံး ဆော်ဒီ အမျိုးသမီးအားကစားသမား # olympicmoments - ဤပုံကို တွစ်တာပေါ်တွင် မျှဝေခဲ့သောာ @ DIAstyle ပေးခဲ့သည့် တွစ်တာမှတ်ချက် ။
(src)="6.1"> Ali Khadra scrive :
(trg)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည်မှာ ၊
(src)="6.2"> ‏@aykcanvas : Non tutto è sempre d' oro !
(trg)="9.1"> ‏ @ aykcanvas ၊
(trg)="9.2"> အမြဲတမ်းရွှေဆိုတာချည်းမှမဟုတ်ပါဘူး ။
(src)="6.3"> Quello che avete fatto è però ancora più grande .
(trg)="9.3"> မင်းလုပ်ခဲ့တာက ပိုပြီးကြီးကျယ်ပါတယ် ။
(src)="6.4"> Grazie #SaraAttar #Wejdan #Wijdan .
(trg)="9.4"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(src)="6.5"> Grazie #KSA .
(trg)="9.5"> ကျေးဇူး # KSA .
(src)="6.6"> Meglio tardi che mai #2012Olympics
(trg)="9.6"> နောက်ကျတာက # 2012Olympics လုံးဝမရောက်တာထက်စာရင် ပိုကောင်းပါတယ် ။
(src)="6.7"> Bader Aljehani scrive orgogliosamente :
(trg)="9.7"> ဘဒါ အလ်ဂျီဟာနီက ဂုဏ်ယူစွာပြောသည်မှာ ၊
(src)="6.8"> @BooDzJ : #SaraAttar Siamo orgogliosi di teeWejdan , più che di chiunque altro della squadra saudita !
(trg)="9.8"> @ BooDzJ ၊
(trg)="9.9"> # SaraAttar ဆော်ဒီအားကစားအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးထက်ပိုပြီး မင်းနဲ့ ဝိုဒန် အတွက် ငါတို့ဂုဏ်ယူပါတယ် ။
(trg)="9.10"> ဆာရာ အတ္တာ ကိစ္စဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ရေပန်းစားနေပြီ ။
(src)="7.3"> Grazie per l' ispirazione #SaraAttar http://twitpic.com/agw7nn
(trg)="9.16"> စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
(src)="8.1"> Dall' altro lato della medaglia , alcuni utenti sauditi di Twitter , contrari alla partecipazione olimpica delle due atlete , incolpano le famiglie delle atleteele autorità per aver permesso che si " infangassero " il nomeela reputazione del regno .
(trg)="9.19"> မင်း ငါတို့ကို သိက္ခာချတယ်
(trg)="10.1"> အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆော်ဒီမှ တွဒ်တာ အသုံးပြုသူအချို့က အားကစားသမား နှစ်ဦးပါဝင်ခဲ့မှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး အားကစားသများ ၏ မိသားစုနှင့် အာဏာပိုင်များကို ဘုရင့်နိုင်ငံတော် အမည်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အပြစ်တင်ခဲ့သည် ။
(src)="9.1"> Tra questi c' è l' utente Twitter Faisal Abuthnain , il quale scrive :
(trg)="11.1"> ထိုတွစ်တာအသုံးပြုသူများအနက် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖိုင်ဆယ် အဘူ ( သ် ) နင်က ရေးသည်မှာ ဆာရာ အတ္တာ ၊
(src)="11.1"> ZaibB , dopo aver letto ciò che è collegato agli hashtag delle due atlete , si lamenta :
(trg)="11.4"> အဲဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းဟာ မင်းရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်တယ် ၊
(src)="13.1"> Povera Wijdan !
(trg)="11.5"> မင်းဘာသာတရားရဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို ချိုးဖောက်တယ် ၊
(src)="13.2"> Tutto ciò che ho letto nel suo hashtag riguardava solo tre cose : 1-Razzismo regionale 2-Razzismo tribale 3-Sessismo
(trg)="13.3"> ( ၁ ) ဒေသစွဲ ( ၂ ) လူမျိုးစွဲ နဲ့ ( ၃ ) လိင်စွဲ တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။
(src)="17.1"> In fine Nourah cerca di giustificarle :
(trg)="16.1"> နောက်ဆုံးမှာတော့ နူရာက နှိုင်းနှိုင်းဆဆ ပြောသွားသည်မှာ ၊
(src)="17.2"> @noura_aljadaan : Per tutti coloro che stanno ridendo di #SaraAttar vorrei ricordare che le scuole qui non insegnano gli sport alle ragazze , quindi la sua partecipazione è stata un grande risultato
(trg)="16.2"> @ noura _ aljadaan ၊
(trg)="16.3"> # SaraAttar ကို လှောင်ရယ်နေတဲ့သူတွေကို မမေ့ဖို့ပြောချင်တာကတော့ ဒီကကျောင်းတွေမှာ မိန်းကလေးတွေကို အားကစားကိုမသင်ကြားပေးတဲ့အတွက် အဲဒီကိုသွားပြိုင်နိုင်တာဟာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာပါပဲ
(trg)="16.4"> ဤအပုဒ်သည် ၂၀၁၂လန်ဒန်အိုလံပစ် အထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ။
(src)="1.1"> Dichiarazione per la libertà di Internet
(trg)="1.1"> အင် ​ တာ ​ နက် လွတ်လပ် ​ ခွင့် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ်း
(src)="1.2"> Come molti hanno messo in evidenza , siamo in una fase cruciale per quanto riguarda la libertà di Internet nel mondo .
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရေးပါတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ ။
(src)="1.3"> Parecchi i Paesi che stanno varando nuove leggi per censurare la Rete ,eparticolarmente i netizen che raccontano la realtà dei regimi repressivi sono sempre piùarischio .
(trg)="1.3"> ဘလော့ဂ်ရေးသူတွေက ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ စွန့်စားနေရတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာဖြတ်ဖို့ ဥပဒေအသစ်တွေကို ဖန်တီးနေကြပါတယ် ။
(src)="2.1"> Negli ultimi anni , svariate organizzazioni si sono alleate per combattereafavore della libertà di Internet .
(trg)="3.1"> ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကြေညာစာတမ်းကို ဖန်တီးဖို့ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များ ⁠ များက လတ်တလောမှာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ် ၊
(src)="3.1"> Con questo in mente , alcuni gruppi internazionali — tra cui Global Voices Advocacy — si sono recentemente uniti per stilare una Dichiarazione per la libertà di Internet .
(trg)="3.3"> ဒီနေ့အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ်းကို အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၀၀ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆက်ပြီးတော့လည်း လက်မှတ်ထိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
(src)="4.5"> Crediamo che una Internet liberaeaperta possa portareaun mondo migliore .
(trg)="6.2"> ၄င်း တို့သည် တိုက်ခိုက်ဆောင်ယူရန် ထိုက်တန်သည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။
(src)="4.6"> Per mantenere Internet liberaeaperta , chiediamo alle comunità , alle industrieeai Paesi di riconoscere questi princìpi .
(trg)="7.7"> အင်တာနက်ကသာ ၄င်းတို့ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ ၍ ဖြစ်ပါသည် ။
(src)="4.7"> Crediamo che questi princìpi possano portareamaggior creativitàennovazione ,ea società più aperte .
(trg)="8.1"> အင်တာနက်ကို လွတ်လပ် ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆက်လက်တည်ရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ ။
(src)="5.1"> Stiamo creando un movimento internazionale per la difesa delle nostre libertà perché crediamo valga la pena battersi per questo .
(trg)="10.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ် ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော အင်တာနက်အတွက် ရပ်တည်ပါသည် ။
(src)="6.1"> Fate in modo che questi princìpi vengano discussi come solo Internet può fare – che siate d’ accordo o meno , parlatene in giro , traduceteli , fateli vostrieallargate la discussione nella vostra comunità .
(trg)="11.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်တာနက် ပေါ်လစီကိုဆောင်ရွက်ရာနှင့် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ပေါ်လွင် ၍ အများပါဝင်နိုင်သော လုပ်ရပ်များကို အားပေးထောက်ခံပါသည် ။
(src)="7.1"> Unitevianoi nel mantenere Internet liberaeaperta .
(trg)="12.2"> အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာမဖြတ်ရန်
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင်း ၊
(src)="7.3"> Siamo per un' Internet liberaeaperta .
(trg)="14.1"> ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ၊
(src)="8.1"> Sosteniamo la trasparenzaeil processo di partecipazione per tutelare Internet stabilendo cinque princìpi base :
(trg)="14.2"> အင်တာနက်ကို လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင် ၊
(src)="9.1"> Espressione : No alla censura di Internet .
(trg)="16.1"> တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့် ၊